रेखा किन ‘सेक्सी’ बनिन् ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← आपराधिक गिरोह पक्राउ
हैटीमा मर्नेको संख्या भयावह, पुरिएका थुप्रै जीवित हुन सक्ने आशंका →
चलचित्र उद्योगमा लागेको मन्दीले कतिपय नायिकालाई वर्षभरीमा एउटा चलचित्र पाउन हम्मे छ । तर नायिका रेखा थापा भने अपबाद् बनेकी छिन् । एकैचोटी दुई-तीनवटामा भ्याईनभ्याई छ उनलाई यतिखेर । आखिर यसरी ह्वात्तै किन बढ्यो त रेखाको क्रेज ? प्राय चलचित्रले रेखालाई चुल्बुले र आधुनिक केटीको भूमिकामा रोजेका छन् । अरु नायिका भन्दा छोटा लुगामा फुरुफुरु नाच्ने रेखालाई निर्माताहरुले मसलाका रुपमा पनि रोजेका छन् । एक निर्माताले भने- उनको ग्ल्यामर्स फोटो पोष्टरमा देखेपछि प्राय नेपाली फिल्म नहेर्नेहरुको पनि मन तानिएको छ । हाम्रा लागि राम्रै हो । संकटको बेला जसरी हुन्छ फिल्म चलाउनु छ । तर एकखाले दर्शक भने चलचित्रको बिचबिचमा नाक खुम्चाउँछन् ।
अभिनययात्राको ५ वर्ष नवित्दै अरु स्थापित नायिकालाई समेत पछि पारेकी नायिका थापामाथि चलचित्र वृतमा अनेक टिकाटिप्पणी भईरहेका छन् । एकथरी भन्छन्- अहिलेको क्रेज बैंश ढल्केपछि टिक्दैन । साहानुभुतिपूर्वक अर्कोथरी भन्छन् दर्शकको मन तान्ने सबैका आ-आफ्नै शैली हुन्छन् नि । रेखा आफैले आफैलाई कसरी हेरेकी छन् त ? के अरुले भनेजस्तै उनि बढि ‘सेक्सी’ वा ‘ग्ल्यामर्स’ नै हुन ? रेखा भन्छिन्- नेपाली चलचित्र पछाडी पर्नुको कारण यस्तै संकुचित मानसिकता बोक्नु हो । मैले जे गरे अहिलेको पुस्ताको माग हो यो । न्युरोडमा हिड्ने सामान्य केटीको भन्दा लगाउने भन्दा मैले चलचित्रमा असमान्य लुगा लगाएकी छैन । यसमा हिच्किचाउने हो भने अझ पछि पर्छौं, भन्छिन् उनि । उसोभए अरु नायिकाले समयको माग बुझेनन् त ? उनि भनिछन्- एक स्त्री, त्यसमा पनि चलचित्रको नायिका, स्वभावैले ग्ल्यामर्स हुनु जरुरी छ । कसले समयको माग बुझ्यो बुझेन भन्दा पनि मैले बुझरनुपर्छ भन्ने हो ।
राजधानीकै जीवनशैलीमा हुर्केकी यि बिबाहित नायिका चलचित्रमा मात्र हैन, वास्तविक जिवनमा पनि छोटा लुगामै ठाँटिन रुचाउँछिन् । अहिले अरुले भन्ने गरेको ‘ग्ल्यामर्स’को दायरालाई सामान्यकरण गर्दै उनि भन्छिन्- यदि त्यस्तो चलचित्र बन्छ भने हलिउड र बलिउडका नायिका जत्तिकै ग्ल्यामर्स बन्न तयार छु ।